Sida Loo Qoro Taariikh nololeedka Barnaamijka Isdhaafsiga Ardayga 2022
Marka aad hesho fursad aad ku booqato waddan shisheeye arday ahaan, waxaad dooneysaa inaad la kulanto wax-barashada fursaddaas oo kale ah. Taariikh-nololeedkii aad u dirto qoyska martida loo yahay ee suurtogalka ah waa aragtida koowaad, marka waxaad rabtaa inaad ka dhigto mid wanaagsan. Arday badan ayaa sanad walba dalbada furitaannada noocaan ah, taasoo ka dhigaysa meelaha bannaan kuwo aad u tartamaya.
Barnaamijyo badan oo wax-iswaydaarsi ah ayaa raba in ardaygu isu sharaxo qoyska cusub ee iman kara intii suurtogal ah. Waxay rabaan CV-ga tusi doona sababta ay kuugu hayaan gurigooda. Waad eegi kartaa muunado curis ah online si aad fikrad uga hesho waxa la filayo, si aad u hesho wakhti sahlan oo aad adigu sameysid. Tusaalooyinka bilaashka ah ee qoraallada iyo qoraallada taariikh nololeedka ee aad internetka ku aragto waxay ka yimaaddeen arday raacay dariiqaaga oo kale. Ma aha oo kaliya kuwo caqli-gal ah laakiin sidoo kale dhiirigelin.
Wax badan ma galaan kuwan qancin sheekooyinka. Waxaad dooneysaa inaad muujiso inaad si cad u fahansan tahay dalka martida loo yahay, dhaqankiisa, iyo taariikhda. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in aad soo saarto dhawr waxyaalood oo ku saabsan waddankaaga, si ay u ogaadaan inay baran doonaan wax cusub.
Haddii aadan qaban karin shaqo weyn - oo xusuusnow inaad heshid hal fursad oo kaliya oo aad ku soo bandhigto aragti, waxaa jira qoraayaal badan oo kaa caawin kara inaad fikradahaaga ku dhejiso ereyo.
Talaabooyinka muhiimka ah ee Qoritaanka Taariikh nololeedka
Isbar si kooban
Yoolalkaaga iyo Faa'iidooyinka Barnaamijka
Noqo mid xiise leh
Ka soo amaahdo Tusaalooyinka Qoritaanka Aqoonyahanka ee onlaynka ah
Warqadda hordhaca ah ee ugu fiican qasab maaha mid rasmi ah buugan sawir. Dadka martida loo yahay waxay u baahan yihiin qof shakhsiyadiisa ka soo dhalaalaysa qoraalkooda iyo mid muujinaya inay qorshe u leeyihiin mustaqbalkooda. Waxay rabaan inay qayb ka noqdaan safarkaaga, laakiin kaliya haddii aad u egtahay inaad ogtahay waxaad rabto. Waa kuwan meelaha qaar ka dhigi doona codsigaaga mid muuqda.
Waa in aad dalkan ku dooratay sabab, ee hadda waqti u qaado si aad u darso. Akhriso taariikhdeeda, ciidaha macne u leh dadka deegaanka, ciyaaraha, hawlaha firaaqada, dugsiyadooda, siyaasaddooda, iyo guud ahaan arrimaha dalka.
Iyada oo ku xidhan dadka laga yaabo inaad la joogto, waxaad doonaysaa inaad ogaato wada sheekaysiga wakhtiga cashada ee caadiga ah ee qoyska caadiga ah ee dalkaas ku nooli yeelan karaan.
Ka akhriso cuntadooda, xidhiidhka ay la leeyihiin deriskooda, iyo wax kasta oo samayn kara wada hadal. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah inta aad wax ka baraneyso dalka, waxaad sidoo kale dooneysaa in aad noqoto qof wada sheekeysi wacan marka laguugu yeero. Ku muuji aqoontaada meesha aad u socoto waraaqahaaga.
Qaybtani waa inay noqotaa mid gaaban oo macaan. Wax yar u sheeg naftaada iyo sababta aad u dooranayso inaad wax ku barato dalkooda. Uma baahnid inaad si xad dhaaf ah u qurux badan tahay halkan, si aad ugu dhawaqdo inaad aad u jeceshahay inaad ka farxiso.
Dadka intooda badan waxay rabaan inay shaqeeyaan ama la falgalaan dadka u oggolaanaya in codkooda la maqlo. Waxaad ka akhrisan kartaa online kale qormooyin bilaash ah si loo arko sida dadku isu baro. Qoraalladan iyo waraaqahan bilaashka ah ayaa ugu horrayn ka yimid dadka si guul leh uga codsaday martigelinta dalal shisheeye. Sida had iyo jeer dhacda, intros waa inay ahaato mid gaaban oo sax ah.
Waxay hore u maqleen sababta aad u rabto inaad dibadda wax u barato; hadda u sheeg yoolalkaaga mustaqbalka. In aad dalkooda wax ku barato oo aad la noolaato saamayn ma ku yeelan doontaa mustaqbalkaaga iyo yoolka aad naftaada u dejisay? Qaybtani waa inay noqotaa mid xog badan oo ka badan mid dood leh. Waxaa jira tusaalooyin cad oo aad ka amaahan karto si ay kaaga caawiyaan inaad qaybtan si sax ah u hesho.
Marka, maxaad adigu oo aadan u ahayn kumanaan codsadayaasha kale? Waxaad fursad u heli doontaa inaad tan kaga hadasho warqadaada si kooban.
Waxaad rabtaa inaad u ogolaato shakhsiyaddaada iyo dareenkaaga tacaburka inay iftiimaan adigoo sidoo kale muujinaya yoolalkaaga iyo sida ay ula jaanqaadaan qorshaha. Xusuusnow inaad si toos ah u noqoto oo daacad ah markaad naftaada ka hadlayso, laakiin isla markaa ha dhaafin xamaasaddaas.
Waxa kale oo aad doonaysaa in aad kalsooni yeelato marka aad ka hadlayso guulahaaga adiga oo aan qarsanayn. Hadda ma aha markii aad hoosta ka xariiqi lahayd guulahaaga, markaa xor u noqo inaad soo bandhigto, laakiin sidoo kale maaha dariiqa aad ugu dhawaaqi karto kibir. Ka fakar kani inuu yahay CV-ga kaliya ee aad waligaa qori doonto oo go'aanso sida qoyska martida loo yahay u garto.
Haddii aad shaqaaleysiin karto khabiiro kaa caawiya inaad qorto warqadda ugu fiican, waa inaad sababtoo ah qaybahani waxay noqon karaan kuwo dhib yar. Haddii aadan awoodin, hel template muunado online ah oo aad isticmaali karto si aad u sameyso maqaalkaaga.
Qaybta ugu fiican, si kastaba ha ahaatee, waa inaad ku raaxaysato inta ugu badan marka tan la qorayo intii suurtagal ah. Ka dib oo dhan, waxa ugu muhiimsan waa inaad runta sheegto, taasina way fududahay maadaama aad adigu leedahay. Wacan oo dhan!
Previous Post:Muhiimada Marxaladaha Soosaarka Muusiga
Post Next:Codso CARHP $ 1000 Dib -u -eegista Baabuurka/Deeq -waxbarasho